Fifidianana kaominaly :: Hanomboka anio ny fandefasana an'ireo fitaovana any amin'ny faritra • AoRaha
Fifidianana kaominaly Hanomboka anio ny fandefasana an’ireo fitaovana any amin’ny faritra
Voahaja ny tetiandro. Vitan’ny Tranom-pirintim-pirenena ara-potoana ny fanontana ny biletà tokana hampiasaina amin’ny fifidianana kaominaly, amin’ny 27 novambra izao. Hanomboka handefa an’ireo fitaovana hampiasaina any amin’ny faritra, toy ny vata mangarahara, ny tara­tasy saro-pady isan-karazany, izay natonta tatsy Afrika Atsimo, ny biletà tokana… ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidia­nana (Ceni) amin’ity heri­nandro ity.
“Heverina ho amin’ny 24 na 25 novambra ho avy izao, fara fahatarany, no hahavitana ny fitsinjarana an’ireo fitaovana ireo any amin’ny faritra. Ny momba ny biletà tokana indray dia efa tamin’ny sabotsy no vitan’ny Tranom-pirintim-pirenena ny asa fanontana.
amin’ireo fitaovana hozaraina isaky ny biraom-pifidianana ireo izany”, hoy Rakotonarivo Thierry, filoha lefitry ny Ceni, tamin’ny antso an-tariby afak’omaly.
Fantatra kosa fa mbola betsaka ny fandikan-dalàna ataon’ireo kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsaina amin’izao vanim-potoanan’ ny fampielezan-kevitra izao.
“Ho an’ny eto Antanana­rivo renivohitra dia tsy mbola nisy nanendry mpitantam-bola amin’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà, na iray aza. Manginy fotsiny ny tsy fanaovana fangatahan-dalana mialoha any amin’ny Prefektioran’ny tanàna rehefa hamory vahoaka amina toerana iray. Hodian-dry zareo fanina fotsiny ny dina « Teny ierana hanompo vahoaka » tokony hosoniavin’ireo kandidà sy ny fanendrena solontena hikambana any amin’ny biraom-pifidianana », hoy hatrany ny filoha lefitry ny Ceni.
Nanentana an’ireo olom-pirenena kosa izy mba tsy hisalasala hitoroka raha mahatsikaritra fihoaram-pefy ataona kandidà, na mpomba azy. “Mila mailo isika. Angony ny porofo. Torio ny mpandika lalàna. Vonona hanampy anareo ireo rantsamangaikan’ny Ceni sy ireo mpanara-maso fifidianana izay efa miparitaka any amin’ny faritra”, hoy hatrany Rakotonarivo Thierry.
Fiverenana an-tsehatra :: Nakotrokotroka ny seho nataon’i Poopy
Famatsiana herinaratra :: “Olana teknika no nahatonga ny fahatapahana”, hoy ny Jirama